Inona no ho hita ao an-tanànan'i Atena | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita ao an-tanànan'i Atena
Susana Garcia | | Atenas, tanàna, General
Atenas Iray amin'ireo tanàna feno tantara izy io, tsy very maina fa manana ny anarany ankehitriny ho an'ny andriamanibavy Athena. Ny Acropolis no toerana tonga ao an-tsaina rehefa mieritreritra an'i Atena isika, tanàna iray any Gresy fahiny, izay azontsika an-tsaina ny fiainana toa azy ireo taonjato maro lasa izay. Saingy mihoatra izany i Athens. Mpifanila vodirindrina velona izy ireo ary kolontsaina grika izay ampitaina amin'ny dingana rehetra ao an-tanàna.
Raha mieritreritra ianao mankanesa any Atena amin'ny fialantsasatraAzo antoka fa efa nametraka ny Acropolis amin'ny làlan-kaleha ianao. Tsy isalasalana fa betsaka ny zavatra azo jerena ao amin'ity tanàna taloha ity, miaraka amin'ny vatofisin'ny tempoly taloha sy tantara maro tokony ho fantatra. Nefa holazainay aminao ny zavatra maro hafa ho hitanao, satria manana tantara i Atena fa ny iray koa dia tanàna feno zoro mahaliana.
3 Ilay faritry Monastiraki velona
4 Ny fomba fijery avy amin'ny Tendrombohitra Lycabeto
5 Kianja Panathenaic
6 Ny Odeon an'i Heroda Atticus
La Acropolis of Athens Ampy ho an'ny dia iray mankany amin'ity tanàna ity, ary izany no tena manintona azy, ny toerana izay te-hahita ny olona rehetra rehefa tonga any Atena izy ireo, ary ny tsara indrindra dia ny hahitantsika azy tsara, satria eo amin'ny tampony havoana ary hazava amin'ny alina. Ity tanàna eo an-tampony ity no toerana misy ny toeram-pivavahana lehibe ary ny toe-javatra misy dia noho ny olana ara-piarovana, satria mora kokoa ny miaro ireo toerana avo ireo. Marina fa ny Acropolis dia nopotehina ary norobaina nandritra ny taonjato maro, fa amin'ny zavatra voatahiry ankehitriny sy naverina amin'ny laoniny dia afaka mamantatra ny toetr'andro tany Gresy taloha isika.
El Parthenon no trano misolo tena be indrindra rehetra, izay nitazomana ny sarivongan'i Athena Parthenos, ilay mpiaro ny tanàna, izay nandrefy roa ambin'ny folo metatra ary tsy eo intsony. Ho fanampin'izany, ity Parthenon ity dia nanana andry lehibe sy frieze izay ahitana sary miseho miloko feno. Ny iray amin'ireo trano tsy tokony ho hita dia ny Erechtheion, miaraka amin'ireo tsanganana miendrika vehivavy izay ny Caryatids, izay tsy ny tena izy fa ny kopia. Ao amin'ny tranombakoka New Acropolis soa aman-tsara ireo tany am-boalohany.
Raha vantany vao miala ny Acropolis isika dia afaka mamakivaky ny manodidina an'i Plaka, ny tranainy indrindra ao an-tanàna ary ankehitriny dia iray amin'ireo mpizahatany indrindra. Toerana mahafinaritra miaraka amin'ny arabe mifandanja sy tranobe taloha. Ny toerana mety hahitana fivarotana kely maro miaraka amin'ny fahatsiarovana mahazatra sy fisotroana misy sakafo ihany koa mahazatra an'ny tanàna. Raha te-hamono ny tena izy ao Athens ianao dia mankafiza ny manodidina an'i Plaka.
Ilay faritry Monastiraki velona
Raha tianao ny manodidina an'i Plaka, akaikin'ny Acropolis, dia ho hitanao ihany koa Monastiraki, toerana tena velona, ​​mety amin'ny fiantsenana. ny tsena monastirakIzaho no zavatra akaiky indrindra amin'ny souk izay hitanao, miaraka amin'ireo magazay misy karazan-dahatsoratra rehetra ary aiza no tsy maintsy hizaranao hitady ny zava-drehetra. Eto ihany koa izahay dia mahita toerana misy fitsidihana mahaliana sasany, toy ny mosque Tzisdaraki na Hadrian's Library.
Ny fomba fijery avy amin'ny Tendrombohitra Lycabeto
Na aiza na aiza tanàna misy sira dia misy toerana manokana ahazoana mijery azy io. Any Atena dia ny Tendrombohitra Lycabettus, izay midika hoe Wolf havoana, ho an'ny maro an'isa nonina azy tamin'ny andro taloha. Ankehitriny isika dia afaka miakatra an-tongotra tsy misy olana, fa ho an'ireo izay tsy te hanao fanazaran-tena be loatra dia azo atao ihany koa ny miakatra amin'ny fiara na ny funicular. Seho tsara raha mandeha amin'ny filentehan'ny masoandro isika, satria misy fahitana tsara momba ny Acropolis sy ny tanàna sisa.
Ny Kianja Panathenaic dia toerana tena ilaina ho an'ireo mpankafy fanatanjahantena, ary ity kianja ity no toerana misy ny Lalao Olaimpika voalohany, tamin'ny 1896. Toerana an'ohatra izy io, satria amin'ny toerana iray ihany, amin'ny 330 a. Kianja kely no natsangana ho an'ny fifaninanana ara-panatanjahantena. Ny fitsidihana dia manana torolàlana am-peo hahafantarana antsipiriany bebe kokoa momba ny kianja, ary afaka mandeha mamaky ny fijoroana isika ary mahazo mihazona ny lampihazo mihitsy aza.
Ny Odeon an'i Heroda Atticus
Ity tranobe ity dia natsangana tsy latsaky ny tamin'ny taona 161 ka hatramin'ny manao audition mozika. Odeon izy io izay eo am-pototry ny Acropolis, noho izany dia akaikin'ny ankamaroan'ny zavatra tiana ho hita isika. Manana rindrina mitafy marbra izy io, ary natsangana mba hananana olona manodidina ny dimy arivo. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity habaka ity dia mbola misy hetsika sy fampisehoana teatra ankehitriny ao. Ny marina dia ny fahitana azy ao anaty dia tsy maintsy mankany amin'ny iray amin'izy ireo ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no ho hita ao an-tanànan'i Atena
Ahoana ny fitsidihana ny Trano Fotsy sy ny Pentagon